Akụkọ Blog nke onye India - THE INDIAN FACE
Iwu + 40 € - N'UBU N'SHL WORLD zuru ụwa ọnụ
Egwuregwu na njem
Njem na Ebe
Ihe omuma na ihe omuma
Art na Omenala
Ahụike na Ọzụzụ
Ugbo ala gị bụ ihe efu
Gaa n'ihu ịzụ ahịa →
Windsurf na Kitesurf na Tarifa Mee ka isi ifufe buru gị buru ibu!
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ịme ihe windsurf na kitesurf enweghi mgbagha Tarifa, n'ógbè Cádiz Ọ bụghị n'efu ka ha maara ya dị ka isi obodo ikuku! Dị njikere ikwe ka ndị kachasị mma nke Andalusia buru gị? Ọ bụrụ na ị hụrụ oke osimiri n'anya, ikuku na njem, wee gụọ ma chọpụta ahụmịhe nke nleta Tarifa, Ezigbo ebe iji eme egbe na ikuku ikuku!
Lee isiokwu zuru ezu
Ramón Larramendi Biography nke onye nyocha polar!
Ramon Larramendi aghọwo otu n'ime ndị ọkachamara na ndị ọkachamara ọkachamara na mpaghara polarỌ sitere n'ụwa, n'ihi nke a kwa, mba ụwa amatara ya dịka onye ọchụnta ego amụrụ na onye njem, raara onwe ya nye ịkwalite nyocha na nchebe nke gburugburu ebe obibi. polarig want chọrọ ịmatakwu banyere àgwà a dị nkọ? Gụọ na ịchọpụta ntakịrị banyere akụkọ ihe mere eme nke Ramon Larramendi na ịhụnanya ya maka ala polares!
Chọpụta Hoi An, obodo mara mma na Vietnam!
Ọ bụrụ na ị gara Hoi An nke a bụ oge gị ime ya! Ubụ obodo njiri mara obodo Vietnam ma mara maka mma ya, akụkọ ihe mere eme ya, omenaala ya na ọdịnala ya. Ọ dị n'etiti Ho Chi Minh na isi obodo Hanoi, O doro anya na Hoi An bụ otu n’ime obodo ndị kachasị eleta ma maa mma na mba ahụ. Gụ ma soro anyị chọpụta ihe kpatara eji ele ya anya dị ka otu n'ime akụ kachasị oke na Vietnam!
Chọpụta ihe ndị mere na ugogbe anya maka anwụ 2020!
Goodfọdụ dị mma gafas de sol Ọ bụrụ nanwere ike ime mgbanwe ... Ma afọ a gafas de sol ha dị ejiji karịa mgbe ọ bụla! Chebe anyị obere radieshon nke anyanwụ ma mee ka anyị yie ihe ịtụnanya mgbe anyị na-ekwupụta ụdị anyị na ụdị mmadụ ị maralarị ugogbe anya anwụ ị ga-ahọrọ n'afọ a? DChọpụta usoro kachasị ewu ewu na ejiji, ụdị na ahụike anya na ugogbe anya maka anwụ 2020!
Zọ ịgba ịnyịnya ígwè 7 iji nwee ọ glassesụ igwe iko igwe gị!
Ọ nyịnya ígwè aghọwo otu n'ime ọrụ ndị a na-eme na oge okpomọkụ a! Omume nke jikọtara egwuregwu kacha mma nke ịgba ịnyịnya na njem njem. You bụ onye na-ahụ n'anya nke njem na ịgba ígwè? Mgbe ahụ jidere nke ọhụrụ gị iko igwe ma soro anyị soro ụfọdụ n'ime ụzọ ịgba ịnyịnya igwe kachasị mma na Spain, juputara na obodo nnọchi anya, na oke ugwu na echiche osimiri!
Okpu Ugbo ala Ugbo ala Trucker Hat Gịnị kpatara o ji ewu ewu nke ukwuu?
na Ihe ndi eji ebu egbe o Ugbo ala Ha aghọwo ndị a ma ama na afọ ndị na-adịbeghị anya ma anyị na-ahụ ya karịa ugbu a n'etiti ndị na-eme egwuregwu, ndị njem na ọbụna ndị ama ama gburugburu ụwa. Mana anyị enweghị ike ịjụ mana ihe na-eme okpu so ewu ewu na gwongworo? Nkasi obi gị na ịdị mma gị? Varietydị ya na ụdị ya pụrụ iche? Chọpụta ihe ise kpatara ya okpu ugbo ala dị nnọọ iche na ndị ọzọ!
Gusi ugogbe anya na gini kpatara m ji were ha?
Burunụ eji enyoanya Ọ dị mkpa mgbe anyị na-eme egwuregwu a n'ụdị ya ọ bụla ụdịdị ski nke dị? Chọpụta anyị ụfọdụ usoro kachasị mma nke ị nwere ike ịkwọ ụgbọ ma mara ihe kpatara ị ga - eji soro ndị ezigbo gị mgbe niile! eji enyoanya nchebe!
Akụkọ banyere Aviator Glasses Kachasị akara ngosi na ụwa!
You maraworị akụkọ ihe mere eme nke ugogbe anya ụgbọ? Mara amara karịa "aviators ”bụ otu n’ime ugogbe anya maka anwụ na-adịkarị mma. Chọpụta otu esi amata ngwa ọrụ ihe atụ a, ma chọpụta ihe mmata nke iko iko ahụ na-agaghị ezo na nchịkọta gị.
Foto Samo Vidic na-awụ akpata oyi n'ahụ
Ime ihe ngosi Samo Okechukwu Ọ dị ike n'ezie, dị ike ma kee ihe, mana ọ na-agụkwa ndụ na akụkọ kacha akpali akpali na njem. Anyị na-ezo aka n'ule! Gụọ na-achọpụta na ịrịba foto ọrụ nke Samo Iwuchukwu, njem foto.
Alex Txikon, obere akụkọ ndụ nke onye nyocha
Chọpụta akụkọ ihe mere eme nke Alex Txikon, otu n'ime Himalayas kacha mma na Spain yana otu n'ime ndị na-eme nchọpụta nke ọma n'ụwa. Soro anyi na njem nke ndu nke onye ugwu Spanish a, ma choputa ka o gha esi ruo ebe kachasi elu ma sie ike na uwa anyi.
Hudson Yards The nanị ọhụrụ obi na New York!
Ọ bụrụ na ọ bụghị oge mbụ ị na-eleta New York ị nwere ike ịlaghachi azụ ma lee anya ọzọ. Nnukwu obodo a bụ ebe obibi kachasị ewu ewu n'afọ ndị a: Hudson Yards. Gụọ na ịchọpụta ihe banyere NYC ọhụrụ na kasị dara oké ọnụ obi dị ka!
Ahụmahụ nke ịrịgo ugwu mgbawa Villarrica
Ntị, ndị njem na-ahụ maka njem njem! Anyị maara na ha nwere mmasị ịmara ebe ọhụụ ma bie ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu na-etinye ndụ ha na oke. Oge a ka anyị na-aga n'otu n'ime ebe ndị njem kachasị njem site na ndị njem na ndị njem si gburugburu ụwa: The Villarrica ugwu mgbawa! Chọpụta ahụmịhe nke ịrịgo ugwu mgbawa ama ama ama na Chile.
Snow ugogbe anya 2020 The ngwa na-enweghị ike na-atụ uche gị!
Ọ gaghị ekwe omume skai ma ọ bụ snowboard enweghị ihe fọrọ nke nta "kpokọtara" aka na snow ugogbe anya ha na-enye ndị na-agba ịnyịnya. E nwere ọtụtụ ihe mere anyị kwesịrị iji na-eyi anyị snow ugogbe anya n'agbanyeghị oge nke afọ. Gụọ na chọpụta ihe kpatara ya ugogbe anya mmiri bụ a ga!
Okpu nkeonwe gosipụtara ụdị na ụdịdị gị!
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ichebe onwe gị site na anyanwụ n'ụdị kachasị mma! Cheta na a Omenala okpu ọ na-enweta mgbe zuru okè Nchikota ịba uru na àgwà. Guo ma chọpụta ihe kpatara okpu na-anọchite ezi onye egwuregwu ị bụ, ma gosipụta agụụ na njirimara gị niile.
Lucas Gilman na foto ya na-awụ akpata oyi n’ahụ
Ad njem anaghị agbanahụ anyị ma ọ bụrụ na anyị nọ n'oge kwesịrị ekwesị na ebe anyị. Nke a bụ ihe nkiri sitere n'aka Lucas Gilman! Pịa ma chọpụta foto ya kachasị mma na usoro foto.
Oke asọmpi egwuregwu iri kacha elu na ihe omume
Chọpụta asọmpi egwuregwu kacha mma kachasị mma na ihe omume na Europe na ụwa!Enwere ọtụtụ ihe na - ezute ụwa na ụwa, site na nke kacha sie ike na ezigbo ọhụụ, ruo na kpochapụwo, akụkọ mgbe ochie na nke "mbụ". Gụọ na mụta banyere asọmpi iri kacha njọ n'ụwa.
Nke a na-eme na mbara igwe na Sydney-Wollongong (Australia)
Otu n'ime ihe ngosi kachasị mma banyere parachute bụ doro anya Australia. Chọpụta ahụmịhe nke gaa skydiving na Sydney - Wollongong!
Miguel Induráin Larraya, onye na-agba ịnyịnya ígwè kachasị agba na Spain
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ịbanye na akụkọ ntolite dị ka egwuregwu kachasị egwu na egwuregwu ị hụrụ n'anya! Mụta ntakịrị ihe banyere ndụ na ọrụ nke Miguel Induráin Larraya, ma chọpụta ihe kpatara ya ji bụrụ otu n'ime ndị ọgba tum tum a ma ama na egwuregwu Spanish.
Wayszọ 5 ị ga-esi nwee ahụ gị maka ugwu
Bụrụ onye ugwu ka nma na mmega ahụ ise a! Ọ dị mkpa zụọ ahụ anyị maka ugwu ọ bụrụ n’anyị na-eme ugwu, ịzọ ụkwụ ma ọ bụ ije ije. Soro ndụmọdụ ndị a ma bụrụ onye egwuregwu kachasị mma kwa ụbọchị site na ọzụzụ na ụzọ ziri ezi!
Ahụmịhe nke igwe n’elu Ugwu Turquoise
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ n'anya na-eme nchọpụta, osimiri paradisiacal na ezumike zuru oke, ozi a bụ maka gị. Chọpụta ihe ịtụnanya dị n'ụsọ Okpo Osimiri Turquoise na Riviera Turkish!
Nke ahụ bụ ezigbo nwa agbọghọ nwere okpu mara mma! Mara usoro ejiji kachasị na 2020
Girlsmụ agbọghọ nwere akwa na-eme ka ọ bụrụ nnukwu na ịntanetị! You nụla banyere ụmụ nwanyị 'mara mma' a ma ama? Nọgide na-agụ ma na-achọpụta ihe banyere ụdị ejiji dị na ịntanetị na 2020.
Oge ise kachasị mma iji yi akwa gogles gị
You dị nkwadobe n’ezie iji merie ihe ize ndụ nke okike mgbe ị na-egwu ski? Chọpụta oge 5 dị oke mkpa nke ị ga-enwe ekele ịkpụ kacha mma goggles snow!
Iko Otu n'ime ihe mgbanwe kachasị ọhụrụ na akụkọ ntolite!
Withoutwa na-enweghị iko ma ọ bụ enyo anya agaghị adị otu ọ bụla. Ngosipụta anya na nchedo ha na-enye anyị enweghị njedebe mgbe anyị jiri iko ziri ezi. Chọpụta ntakịrị banyere akụkọ ihe mere eme n'azụ iko, otu n'ime ihe ndị kachasị mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ!
Ngwa Dropshipping Ugogbe anwụ na ngwa
Nwere ike ugbu a ịnụ ụtọ uru niile nke ọrụ anyị nkesa dropshipping, yabụ ị nwere ike ree ahịa ma dịkwa mma na azụmaahịa gị n'ịntanetị.
1 2 3 ... 15 Ọzọ
© 2020 THE INDIAN FACE. © 2017 THE INDIAN FACE. Ikike niile echekwabara.